Multi-basa chinokukunda V5.0 ste ...
Makaralı kure kuzvidzora WI ...
1. Diki uye yakasununguka, inogona kutakurwa pamwe newe;
2. Kudzora nhare mbozha: pindura iko kufona, simudzira kufona, rwiyo rwemberi, rwiyo runotevera, imbomira kutamba, vhoriyamu kumusoro, vhoriyamu pasi;
3. Inogona kushandisa mota mimhanzi kudzora, bhasikoro mimhanzi kudzora, mudhudhudhu bhasikoro kutonga, skiing;
4. Chigadzirwa hachigari chiteshi cheBluetooth. Mushure mekunge nhare mbozha yabatanidzwa nechigadzirwa, chimwe chigadzirwa cheBluetooth (senge Bluetooth headset, Bluetooth odhiyo, mota DVD DVD) inogona kubatanidzwa kudzora foni kuteerera mimhanzi uye kupindura nekurembera foni. Ruzha rwuri kuburikidza nepaviri zvimwe zvigadzirwa zveBluetooth Vocalize;
5. IPX4 isina mvura level;
6. Makaralı 5.0;
7. Bhatiri kugona: 200 mA.
Iyo yeBluetooth Hands-isina Bhatani inoisa midhiya kutonga uye Maoko-emahara kusheedzera kuma ngertips ako nemuchina mumwe webhatani. Batanidza iyo bhatani kune rako rekutyaira kana dhibhodhi kuti uchengetedze uye nyore dzora mashandiro kunyangwe kana yako smartphone isingasvikike.
Pindura / Sungirira kumusoro, tamba / imbomira, kumberi / kumashure, uye gadzirisa vhoriyamu kunyangwe foni yako iri muhomwe yako, chikwama, chakabayirwa mumadziro, kana kumwe kunosvika mamita makumi mana kure!
Apple iOS zvishandiso zvinotsigira Bluetooth 3.0 uye gare gare;
Android zvishandiso zvinotsigira OS 4.0 kana gare gare.
Shandisa iyo inosanganisirwa gomo kubatanidza iyo BT Bhatani kune rako rekutyaira kana pamabharanzi ebhasikoro, achikubvumidza kuti uchengete maziso ako munzira uye maoko ako ari pairi vhiri. Unogona kuvhara Microphone Audio tambo mune yako mota stereo yekutaura-isina maoko.
1. Ita shuwa kuti foni yako kana piritsi reBluetooth iri "On".
2. Tarisa "BT009" pane zvinyorwa zvakawanikwa.
3. Sarudza "BT009" uye mirira iyo pop up menyu.
4. Tinya bhatani re "Pair" pane iyo pop up menyu.
Kana paine runhare rwunouya, unogona kubatanidza foni yako kana piritsi kune stereo yemotokari neMicrophone Audio tambo, wobva wadzvanya kiyi kuti upindure kana kuturika runhare kana uchityaira.
Uchishandisa Multimedia Mabasa
1. Vhura zvemuno odhiyo kana vhidhiyo maapp.
2. Kutamba / kumbomira.
3. Chinja vhoriyamu uye tamba makwara.
1.Re-vaviri mushure mekubviswa
a. Kana Bluetooth ikatsemura, ingori refu yekudzvanya kiyi uye Green
LED ichatanga kupenya.Izvi zvinoratidza kubatana zvakare pakati pefoni yako neButton.
2. Kutadza kudzora bhatani
Nemaoko pinda "play" mu media media app yaunoshuvira kushandisa, wobva waedzazve bhatani mashandiro.
b) Edza kudzima uye kubatanidzazve bhatani, sezvatsanangurwa pamusoro.
3. Kutadza kubatanidza
a. Tarisa iyo Bhatani Bhatani yakashandurwa pane kusabvisa.
Bluetooth Hands-isina Bhatani
Bracket 3M Sticker (Chena divi kunama pamotokari)
Pashure: Bluetooth Remote control ine google mubatsiri
Zvadaro: IR kudzidza kudzora kure
Makaralı Ir Remote
Makaralı Ir Universal Remote
Tsika Makaralı Remote Control
Makaralı Multimedia Button yeMotokari Wireless Co ...